फोनवागन: तपाईको एनालिटिक्स संग कल ट्र्याकि Imp लागू गर्न चाहिने सबै | Martech Zone
जब हामी हाम्रा केही ग्राहकहरूको लागि जटिल बहु-च्यानल अभियानहरू समन्वय गर्न जारी राख्छौं, यो अत्यावश्यक छ कि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ कि फोन कहिले र किन बजिरहेको छ। तपाइँ घटनाहरू थप्न सक्नुहुन्छ हाइपरलिked्क फोन नम्बरहरू क्लिक-टु-कल तथ्या .्कहरू निगरानी गर्न, तर प्रायः त्यस्तो सम्भावना हुँदैन। समाधान कार्यान्वयन गर्नु हो कल ट्र्याकिंग र सम्भावितहरूले फोन कल मार्फत कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् हेर्न अवलोकन गर्न यसलाई तपाईंको विश्लेषणको साथ एकीकृत गर्नुहोस्।
सबै भन्दा सही मतलब छ गतिशील रूपमा एक फोन नम्बर उत्पन्न गर्नुहोस् प्रत्येक स्रोतको लागि जुन उही क्षेत्र कोडहरूको बीचमा हुन्छ। यो बाटो हरेक एक आगमन फोन कल अभियान स्रोत वा मध्यममा सही रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ जुन तपाईंले यसलाई सिर्जना गर्नुभयो। थप रूपमा तपाईसँग कल जेनरेट पनि हुन सक्छ यात्रा गुगल एनालिटिक्सलाई भर्चुअल मार्गमा जुन तपाईं रूपान्तरण ट्र्याकिंगमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ।
यो सबै को लागी तपाइँ संग एक सेवा छ कि आवश्यकता छ फोनगागन, एक मार्केटिंग एजेन्सीहरूका लागि विशेष रूपमा निर्मित सेवा उनीहरूको ग्राहक कल ट्र्याकिंग प्रबन्ध गर्नका लागि।
फोनगागनका सुविधाहरू समावेश:
तत्काल फोन नम्बर सेटअप - फोनगागन एक सहज र उपयोग गर्न सजिलो ड्यासबोर्ड प्रदान गर्दछ जुन कोहीले पनि बुझ्न र नेभिगेट गर्न सक्दछ। एक बटनको क्लिकको साथ, तपाईं तत्काल कुनै पनि क्षेत्र कोड खोजी गर्न र फोन नम्बर थप्न सक्षम हुनुहुन्छ। Seconds० सेकेन्ड भन्दा कममा तपाईं फोन नम्बर थप्न सक्नुहुनेछ, नम्बर कन्फिगर गर्नुहोस्, र तुरून्त प्रयोग सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोन नम्बरहरू - फोनगागनले 80० भन्दा बढी देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फोन नम्बर प्रस्ताव गर्दछ। हाम्रो साधारण ड्यासबोर्डले तपाईंलाई देश र क्षेत्र कोड द्वारा फोन नम्बर खोजी गर्न अनुमति दिन्छ। Seconds० सेकेन्ड भन्दा कममा तपाईं आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय फोन नम्बर कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको अभियानहरूको लागि प्रयोग गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
स्थानीय फोन नम्बरहरू - स्थानीय फोन नम्बर स्थानीय साना व्यापार मार्केटिंग अभियानको लागि टोल फ्री नम्बर भन्दा बढी रूपान्तरण गर्न को लागी प्रमाणित छन्। चाहे तपाईलाई एक विशिष्ट शहर मा एक स्थानीय फोन नम्बर चाहिन्छ वा केवल एक स्थानीय क्षेत्र कोड, फोनवागनले तपाईंलाई phone० सेकेन्ड भन्दा कममा स्थानीय फोन नम्बरहरू थप्न अनुमति दिन्छ।
टोल फ्री नम्बरहरू - टोल फ्री फोन नम्बर राष्ट्रिय मार्केटिंग अभियानहरु को लागी महान हो। उनीहरूले तपाईंको कम्पनीलाई राष्ट्रिय उपस्थितिको उपस्थिति दिन र ग्राहकहरूलाई तपाईंलाई टोल-फ्री कल गर्ने तरिका प्रदान गर्न सक्दछन्। हाम्रो ड्यासबोर्डमा तपाईं सजिलैसँग टोल-फ्री फोन नम्बर थप्न सक्नुहुन्छ विभिन्न विकल्पहरू जस्तै from 888, 866,, र अन्यबाट। यो टोल फ्री फोन नम्बर थप्न र यसलाई कन्फिगर गर्न seconds० सेकेन्ड भन्दा कम लिन्छ।
तपाईंको हालको फोन नम्बरहरू पोर्ट गर्नुहोस् - के तपाईं आफ्नो अवस्थित फोन नम्बर प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईंसँग अर्को कल ट्र्याकि provider प्रदायकको साथ फोन नम्बरमा नम्बरहरू सार्न चाहनुहुन्छ? सजिलो हामी तपाईको नम्बरहरुलाई फोनगागनमा सार्न सक्छौं “पोर्टि” ”भन्ने प्रक्रिया मार्फत। फोनवागनले सबै भारी लिफ्टिंगको ख्याल राख्दछ र तपाईंको नम्बरहरू तपाईंको फोनवागन खातामा कुनै समय बिना नै हुनेछ।
कल रेकर्डिङ - केवल फोन कल ट्र्याकिंग पर्याप्त छैन। कल रेकर्डि to सुन्नाले तपाईको स्टाफलाई कोच गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ उनीहरूले अधिक कललाई भुक्तान गर्ने ग्राहकमा रूपान्तरण गर्न के भन्ने भनिरहेका छन्। कल रेकर्डि। पनि पछाडि जान र जानकारीको एक टुक्रा लिने उत्तम तरिका हो जुन तपाईं कलको बखत लेख्न बिर्सनुभयो। फोनवागनले तपाईंलाई कलहरू वा तपाईंको कुनै पनि फोन नम्बरहरू रेकर्ड गर्न सक्षम गर्दछ र वैकल्पिक रूपमा अभिवादन सन्देश खेल्नको लागि अन्य कलरलाई कल रेकर्ड गरिएको छ भनेर थाहा दिनुहोस्।
Wहिसप सन्देशहरू - हाम्रो कानाफूसी सन्देशहरू एजेन्ट वा स्टाफ सदस्यलाई दिने उत्तम तरिका हो जुन फोनलाई उत्तर दिइरहेको छ कि कल कहाँबाट आउँदैछ। जब उनीहरूले कलको जवाफ दिन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ जस्तो कि "यो कल छुट्टी छुट प्रस्तावको साथ तपाईंको पोष्टकार्ड अभियानबाट हो"। एजेन्टहरू अब कलमा केहि प्रसंग छन् र उनीहरूले त्यो जानकारीको आधारमा ग्राहकसँग कसरी कुराकानी गर्छन् भनेर टेलर गर्न सक्छन्। यो एक धोखा कोड जस्तै छ जुन तपाइँलाई जीत गर्न सहयोग गर्दछ।
अभिवादन सन्देशहरू - फोनवागनले कलको सुरूमा कलरलाई अभिवादन सन्देश प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं हाम्रो अनुकूल-मा-प्रयोग ग्रीटिंग सन्देश सिर्जनाकर्ता उपकरणहरू मार्फत अनुकूलन ग्रीटिंग सन्देश रेकर्ड गर्न छनौंट गर्न सक्नुहुनेछ वा एमपी file फाईलबाट अवस्थित सन्देश अपलोड गर्नुहोस्। अभिवादन सन्देशहरूले तपाईंको ब्यापार परिचय गराउँदछ र तपाईंको ग्राहकहरूलाई व्यावसायिक प्रभाव दिन सक्छ वा कलर रेकर्ड भइरहेको छ भनेर तपाईं कलरलाई बताउन सक्नुहुन्छ।
कस्टम कल ट्यागि। - कल ट्याग गर्दै तपाईंलाई वर्गीकृत गर्न, संगठित गर्न, वा वर्गीकृत गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं ट्र्याक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ मापदण्डको आधारमा। हामीसँग "नयाँ लीड", "गलत नम्बर", "अवस्थित ग्राहक", इत्यादि जस्तो पूर्व-अवस्थित ट्यागहरू छन्। हामी सिधै हाम्रो ड्यासबोर्डबाट अनुकूलन र colors्गहरूको साथ कस्टम ट्यागहरू सिर्जना गर्ने क्षमता पनि प्रस्ताव गर्दछौं। त्यसोभए तपाईले रिपोर्ट चलाउन सक्नुहुन्छ कि प्रत्येक ट्यागमा कति कलहरू (वा कति पटक पहिलो पटक कलहरू) उत्पन्न गरियो भनेर हेर्नका लागि।
एक साथ रिंग - नेतृत्व उत्पादन सबै गति बारे हो। छिटो तपाईं जवाफ, वा फोन जवाफ, अधिक नेतृत्व तपाईं भुक्तान ग्राहकहरु मा रूपान्तरण हुनेछ। हामी एकै समयमा धेरै फोनहरू घण्टी बजाउने क्षमता प्रस्ताव गर्दछौं। जवाफ दिन पहिलो व्यक्ति कलरमा जडान हुनेछ। यसले इनबाउन्ड कलहरूको लागि प्रतीक्षा समय घटाउन मद्दत गर्दछ, राम्रो ग्राहक अनुभव प्रदान गर्दछ, र अधिक बिक्री उत्पन्न गर्दछ।
असीमित उपयोगकर्ता खाताहरू - फोनगागनले तपाईंलाई तपाईंको खातामा असीमित प्रयोगकर्ताहरू थप्न अनुमति दिन्छ। हामी बिभिन्न अनुमतिहरूको साथ धेरै फरक उपयोगकर्ता भूमिका प्रस्ताव गर्दछौं ताकि तपाईं सबैलाई लगईन प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरू केवल पहुँच गर्न सक्षम हुनेछन् उनीहरूलाई पहुँच गर्न आवश्यक पर्ने चीजहरूमा।
ग्राहक खाताहरू - फोनगागन प्रत्येक खातामा बहु कम्पनीहरू वा स्थानहरू सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको हो। यसले तपाईको डेटालाई सही कम्पनी वा स्थानमा राख्दछ जसरी तपाईंले गुगल विज्ञापनमा गर्नुहुन्छ। मार्केटिंग एजेन्सीहरूले आफ्ना सबै ग्राहकहरू थप्न सक्दछन् र प्रत्येक ग्राहकलाई लगइन उपलब्ध गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूको आफ्नै जानकारी पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ।
ईमेल सारांश - के तपाईं तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगईन नगरीकन तपाईंको कलहरूको बारेमा सबै डाटाको साथ ईमेल प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? फोनगागनले ईमेल सारांशहरू दैनिक, साप्ताहिक, वा मासिक प्रदान गर्दछ। तपाईं यी ईमेलहरू अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई तपाईंको डोमेनबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसले मार्केटिंग एजेन्सीहरूलाई ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्दा आफ्नो ब्रान्ड सुसंगत राख्न अनुमति दिँदछ।
ईमेल कल अलर्टहरू - ईमेल कल सचेतहरू वा ईमेल सूचनाहरूले तपाईंलाई कुनै पनि अभियानबाट कुनै पनि नयाँ कल आएको बेलामा स्वचालित रूपमा ईमेल पठाउन अनुमति दिन्छ वा तपाईं यसलाई विशेष अभियानहरूको लागि पठाउन मात्र सेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ यी ईमेलहरू तपाइँको डोमेनबाट पठाउनको लागि अनुकूलन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ (जस्तै "notifications@yourdomain.com") तपाइँको ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्दा लगातार ब्रान्डि maintain कायम गर्न।
उन्नत रिपोर्टिंग - सजिलै तपाईको फोन कल डेटामा आधारित बलियो रिपोर्टहरू पहुँच गर्नुहोस्। अन्तरदृष्टि डाटा हेर्नुहोस् जस्तै अभियानहरू ड्राईभिंग कलहरू छन् जुन भुक्तान गर्ने ग्राहकहरूमा रूपान्तरण हुन्छ वा कति पटक कलहरू पहिलो पटक कलरहरू र seconds ० सेकेन्ड भन्दा बढीका छन्। यस डेटा प्रयोग गरी विज्ञापन खर्च र / वा तपाइँको ग्राहकहरु लाई कसरी भुक्तान गर्ने ग्राहकहरु लाई कल रूपान्तरण गर्न को लागी एक राम्रो काम गर्न को लागी को लागी स्मार्ट निर्णय गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
गतिशील फोन नम्बरहरू - डायनामिक फोन नम्बरहरूले तपाईंलाई फोन कल रूपान्तरणहरू ट्र्याक गर्न सक्षम गर्दछ जसरी तपाईंले वेब फारम रूपान्तरणहरू ट्र्याक गर्नुहुन्छ। वेबसाइट वा ल्यान्डि page पृष्ठमा थप्न हामी तपाईंलाई कोडको एक लाइन दिन्छौं र बाँकी हामी गर्छौं। फोन कलहरू आगन्तुकहरूको सत्रमा ट्र्याक हुन्छन् र तपाईले डेटा प्राप्त गर्नुहुन्छ कि आगन्तुक कहाँबाट आए, उनीहरूले क्लिक गरेको विज्ञापन, ल्यान्डि they पृष्ठ जुन तिनीहरू मा अवतरण गरे, र अझ बढि। D० सेकेन्ड भन्दा कममा तपाईको ड्यासबोर्डमा एक डायनामिक नम्बर सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको मार्केटिंग अभियानहरूको साथमा के भइरहेको छ भन्ने बारेको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न फोन कल रूपान्तरणहरू ट्र्याक गर्न सुरू गर्नुहोस्।
आगन्तुक र कीवर्ड-स्तर ट्र्याकिंग - हामी हाम्रो गतिशील नम्बरहरू प्रयोग गरेर आगन्तुक र कीवर्ड-स्तर ट्र्याकिंग प्रदान गर्दछौं। किनकि प्रत्येक आगन्तुकलाई एक अद्वितीय नम्बर देखाइएको छ, हामीलाई थाहा छ कि ती आगन्तुकले उनीहरूलाई देखाइएको अनौंठो नम्बरमा कल गर्दछ र त्यसैले हामी उनीहरूको फोन कललाई उनीहरूको सत्रमा एट्रिब्यूट गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई अविश्वसनीय ग्रेन्युलर डाटा दिन्छ जस्तै उनीहरूले खोजेको खोजशब्द र विज्ञापन समूह जुन तिनीहरू आएका थिए।
गुगल एनालिटिक्स एकीकरण - फोनवागन गुगल एनालाइटिक्सको साथ तपाईंको फोनवागन खातामा प्रत्येक कम्पनीको लागि प्रत्यक्ष एकीकरण प्रदान गर्दछ। तपाईका सबै फोन कलहरू गुगल एनालिटिक्समा घटनाको रूपमा धक्का दिन सक्नुहुन्छ ताकि तपाई वास्तवमै के हुँदैछ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ र कति रूपान्तरणहरू तपाई ड्राईभ गर्दै हुनुहुन्छ, यी अफलाईन घटनाहरूबाट पनि।
गुगल ऐडवर्ड्स एकीकरण - फोनगागन सीधा गुगल विज्ञापनको साथ एकीकृत गर्दछ (पहिले गुगल ऐडवर्ड्स) एउटा क्लिकको साथ, तपाईले प्रत्येक कम्पनीलाई तपाईको फोनगागन खातामा तपाईको एमसीसी गुगल विज्ञापन खाताको साथ एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ, उप-खाता छनौट गर्नुहोस्, र तुरून्त हामी फोनकल्स नामक एक नयाँ रूपान्तरण कार्य सिर्जना गर्नेछौं जुन तपाईको गतिशीलबाट सबै कलहरूको लागि गुगल विज्ञापनमा रूपान्तरण धकेल्छ। त्यो कम्पनीमा नम्बर।
स्वचालित पाठ सन्देश - छुटेका कलहरू र अन्य घटनाहरूको लागि पाठ सन्देश जवाफ सिर्जना गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई ग्राहकहरूलाई उनीहरूको मनपर्दो तरीकाको संचार विधि, पाठ सन्देश पठाउँदै मद्दत गर्दछ, र उनीहरूले प्रतियोगीलाई कल गर्नबाट रोक्छ यदि तपाईंले आफ्नो फोनको उत्तर नदिनुभयो भने।
फोनवागन द्वारा प्राप्त गरिएको थियो कलरेल, कल ट्र्याकिंग एनालिटिक्स मा अर्को नेता।
तपाईको नि: शुल्क परीक्षण फोनगागनबाट सुरू गर्नुहोस्
खुलासा: हामीलाई फोनवागन यति मन पर्छ कि हामी अब उनीहरूका लागि राजदूत हौ!
टैग: विज्ञापन समूहकल ट्र्याकिंगकल ट्र्याकिंग एनालिटिक्सगुगल विज्ञापनहरूgoogle adwordsGoogle विश्लेषणहबस्पटफोन ट्र्याकिंगफोनवागन